musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Belgian Nhabvu Vatambi Divock Origi Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBlack Genius iyo inozivikanwa zvikuru se "Origi". Our Divock Origi Childhood Story pamwe neS Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino. Kuongorora kunosanganisira mhuri yake, nyaya yeupenyu musati mazita, kusimudzirwa mukurumbira nyaya, ukama uye hupenyu hwehupenyu.
Hongu, munhu wose anoziva nezvemheni yake uye kutendeseka semuvengi. Zvisinei, vashomanana chete ndivo vanoona Divock Origi's Biography iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina kunze kwekuita, ngatitangei.
Divock Origi Childhood Nyaya Dzechokwadi Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Kutanga kubva Divock Okoth Origi akazvarwa musi we 18th waApril 1995 paOstend muBelgium. Akanga ari wechipiri pavana vatatu vakazvarwa naamai vake, Linda Adhiambo uye kuna baba vake, Mike Origi.
Vabereki veOrigi vane mitambo yevanhu vemunyika vanofarira veKenya avo vakamuendesa munyika panguva imwe chete baba vake vaiita zvebasa rekutsvaga KV Oostende muBelgian pro league. Origi akasimudzirwa kumunharaunda weBelgian weHouthalen-Oost apo akakurira pamwe nehanzvadzi yake mukuru Natasha uye hanzvadzi Deneen.
Paaikwira kuHouthalen-Oost, nyika yeBelgium neKenya yemadzinza madema neKenian-Luo midzi, yakaratidza kuva apuro isina kuwira kure nemuti nekuratidza maitiro ebhodhi.
"Mabhora akanga atova mumba nguva pfupi paakatanga kutamba. Aiwanzovarova mumba uye mumunda. "
Akayeuka Mike wekuda kwake kwemukomana webhola.
Divock Origi Childhood Nyaya Dzechokwadi Untold Biography Facts -Career Buildup
Yakanga isati yava nguva refu mutambo wenhabvu wakanyoreswa muhurongwa hwevechidiki weBelgian provincial provincial team, KFC De Zwaluw Wiemesmeer apo aive akwegura 5.
"... uye Kubvira pamakore matanhatu, akanga atova netarenda uye akanga akareba uye akasimba kudarika mamwe vana."
Anoti Mike ane hutano hwekukura.
Zvichizoitika zvitsva zvebhora revechidiki vakaona Origi achienda kumapoka eBelgium, KRC Harelbeke uye gare gare KRC Genk apo baba vake vaiva nezvigadzirwa zvemagetsi. Yaiva pamitambo yevechidiki yeKRC Genk iyo Origi yakanyora kukura kwakakura kwebhola pamwe nevanodzidza paPark Houthalen Primary School uye Sint-Jan Berchmans College.
"Uye apo hurukuro yake yechikoro yaizouya, ndaizoona mazwi evadzidzisi kuti akanga akanaka nebhora uye kuti ndiye akanga ari nani pakati pezera rake".
Divock Origi Childhood Nyaya Dzechokwadi Untold Biography Facts -Road To Fame
Zvakakosha kucherechedza kuti Origi aiva nehuwandu hwehuduku hwake paKRC Genk kwaakadzidziswa kwemakore 9 asati asvika kuLille iri pedyo neFrance pazera re 15. Paaiva paLille, Origi akaisa mitambo inofadza yakaita kuti vatambi vaibva kuLiverpool vafunge.
Nyanzvi yeChirungu haifaniri kuva nechivimbo chekuti Origi yaizovapa mhanho yakanaka yemari yavo mushure mekunge vamuona ari kutumira boka reBelgium rakatarisana nekambani yekugogodza ye2014 World Cup nekukwikwidza chinangwa chake chekutanga chepasi rose mumutambo we 87th 1-0 kukunda Rashiya.
Akazopiwa chikwangwani chemakore matanhatu nechikamu cheChirungu pa 29th yaJuly 2014 pamubhadharo we 10 Million pounds uye akabva atora chikwereti kuna Lille kuti ave neruzivo rwechikwata chekutanga.
Divock Origi Childhood Nyaya Dzechokwadi Untold Biography Facts -Simuka Mukurumbira
Origi akawana ruzivo rwakanyanya rwunoda kutamba naLille panguva yezvaakakwereta muzororo 2014-2015. Akazobatana neLiverpool mumwaka unotevera mushure mokugadzira zvigaro zve 44 uye kubvisa zvikwereti zve 9 zvinangwa zveLille.
Origi akaita chikwata chake cheLiverpool sechinotsiva pachibvumirano chake neAlex United. Pasina nguva refu, akawana matanho ake okutanga okukwikwidza kweLiverpool nekukanda chikwata muLiverpool's 6-1 kukunda Southampton.
Divock Origi Childhood Nyaya Dzechokwadi Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Pakave pasina nhoroondo dzeukama hweOrigi hwekare kana kufambidzana. Uyewo haasiko kune hukama kune hukama hwake huripo. Izvi zvinonyangadza kusvika pakuziva kuti mberi kunonyanya kunetseka nezvekutora basa rake kune zvikurusa zvakakwirira.
Asi zvisinei, Origi ane zvazvinotora kuti aite mukomana kana kuti murume anoyevedza akapiwa mararamiro ekuranga uye anotarisa zvaanounza kumutambo webhola.
Divock Origi Childhood Nyaya Dzechokwadi Untold Biography Facts -Upenyu hweMhuri
Divock Origi akaberekerwa mumhuri ine rudo yemitambo. Tinokuudza mashoko echokwadi pamusoro pemhuri yake yepedyo uye yakawedzerwa.
Nezvebaba vaOrigi: Mike Okoth Origi ndiye baba vei mberi. Akazvarwa musi we 16th waNovember 1967 kuNairobi kuKenya. Kusiyana nemwanakomana wake, Mike akatanga semuchengetedzi wemugove uyo akatendeukira kuStatan for Shabana muKenyan Super League. Akazopedzisira aenda kuBelgium club, KV Oostende mu1992 uye 3 makore akazotevera, akagamuchira kuberekwa kwemukomana wake wekutanga uye mwana wechipiri Divock.
Nechekudavira kuti ndiye mutambi wekutanga wekuKenya kutamba muEurope, Mike ave ari baba uye mutungamiri kumwanakomana wake uyo akamuremekedza nekuda kwekupira kwake kwebhola.
"Pandakanga ndiri Kid, ndaigona kuona baba vangu vane chirango chakawanda uye mumutambo kana iwe uchipa zvinhu zvose kumutambo, mutambo uchagara uchipa chimwe chinhu."
Akati Divock wekubata kwababa vake.
Muduku Divock nababa vake Mike
Baba nemwanakomana vanochengetedza ukama hwepedyo naMike kuti vatsigire maitiro ekutsigira mazhinji emitambo yeDivock kuti vamufadze.
Nezve amai vaOrigi: Linda Adhiambo amai vaOrigi. Kufanana nemurume wake, Linda ari pedo nemwanakomana wake oga ane heroic uye akanaka anoita kuti aonekwe pakati pevana vekuKenya neBelgium.
Pamusoro peOrigi's Siblings: Vana vaOrigi vanosanganisira Natasha naDeneen. Natasha ndiye mukuru kune vehama. Akakurira naOrigi avo vaifambidzana nemafungiro ake ebhora naye. Iye anewo mwanasikana - Maliya uyo mucheche waOrigi. Deneen, kune rumwe rutivi, ndihanzvadzi yaOrigi muduku uye mumwe wevadzidzi vake vakawanda.
Kuruboshwe-Kurudyi: Baba vaDivock Mike, hanzvadzi duku - Deneen, hanzvadzi yakwegura -Natasha nemwanasikana Maliya, amai vaDivock vaLinda naDivock.
Nezve Origi's Relations: Kunze kubva kwaOrigi paukama hwepedyo ndivo vanamunini vake Austin, Gerald naAnthony avo vakatevedza mauto ehutano mune dzimwe nyika. Divock anewo munun'una wake Arnold Origi uyo anotamba bhodhi rebasa semutariri wepamberi yeLillestrom neTenya yenyika yose.
Divock Origi Childhood Nyaya Dzechokwadi Untold Biography Facts -Untold Career Facts
Divock ndiye mutambi wekutanga weKenya kubva mumakwikwi muitiko yeNyika Cup.
Mucheche dolphin wakanyorwa "Origi" kuBouwiwijn Seapark muBruges. Kubudirira kwakauya mushure mekuda kweDiyock yechirongwa cheminye 88th yakatumira boka reBelgium rutsigiro kumakorokota ekugadzirisa kweNdebe Yenyika ye2014, mune 1-0 kukunda Russia. Zvinosuruvarisa kuti Dolphin haana kurarama kwenguva yakareba sokuti yakafa mazuva akazotevera.
Divock Origi Childhood Nyaya Dzechokwadi Untold Biography Facts -Personal Life Facts
Divock Origi anodiwa navaviri vekuKenya neBelgium pasinei nokuti havasi ivo vanomiririra yekare pane zviitiko zvenyika dzakawanda. Asi zvisinei, anogadzirira vaKenya kuburikidza vachitaura zvakanaka muchiSwahili kune mufaro wavo.
Anotaura zvakare Flemish, mutauro waakadzidza paanokura paOstend uye ane murairo wakanaka weDutch. Divock anoda mhuri, yebhola uye ane zvaanoda mune zvepfungwa, kunyanya kushanda simba kwehuropi hwehupenyu uye kuti hunosangana sei nemhando dzakasiyana dzemunhu.
Divock Origi Childhood Nyaya Dzechokwadi Untold Biography Facts -Lifestyle
Divock inonzi ine imba inobhadhara $ 1 Million muBelgium. Mari dzake dzinounganidza zviratidzo zvakadai sa Audi, Ford pamwe ne Mini Cooper iyo inotungamirira kudzidzira.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nokuverenga Divock Origi Childhood Story uye Untold Biography Facts. At LifeBogger, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukawana chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka, tapota shandisa nesu nekupindura pasi apa. Tichagara tichikoshesa uye tichiremekedza pfungwa dzako.
Thibaut Courtois Urubhabhatidzo Mubhuku Plus Untold Biography Facts